अन्न भण्डारण लागि silos: विशेष गरी निर्माण, स्थापना र प्रकार
भण्डारण अवस्था को प्राविधिक संगठन - बाली को उपचार मा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरणमा एक। कृषि उत्पादन को अस्थायी थुनामा लागि सही उपकरण चयन गर्न कसरी अन्तिम उत्पादन को गुणवत्ता मा निर्भर गर्दछ। लागि आधुनिक Silos अन्न भण्डारण यस्तो कार्य को लागि इष्टतम छ। वास्तवमा, तिनीहरू barns को समारोह, तर थप परिष्कृत र व्यावहारिक डिजाइन प्रदर्शन।
बाह्य, डिजाइन विशाल र जटिल देखिन्छ, तर यो मात्र केही भागहरु उत्पन्न गर्छ। यो सूची ventilated धातु कन्टेनर, ढकने र तल समावेश छ। ढक्कन जो 20 सेमी को हाइट्स पुग्न fastened करङहरु विशेष क्षेत्रहरु देखि भेला छ। पट्टी, इस्पात बनेको प्रसारित जस्ती। सामान्यतया, छत को सामाग्री गुणहरू सुरक्षा को standpoint देखि डिजाइन को सबै भन्दा मांग भाग हो। पनि भूल छैन कि अन्न भण्डारण लागि धातु Silos - सामग्री बाहेक, र उत्पादन डाउनलोड गर्न मौका प्रदान गर्नुपर्छ भनेर, एक संरचना। केही उपकरणहरू मा ढक्कन फिड च्यानल प्रदान गरिएको छ, र निरीक्षण प्वाल र latches termopodvesok।
आवास नै सामान्यतया एक तरंग बनावट संग प्यानल एक संरचना हो। को यौगिकों बोल्ट द्वारा प्रदान, जो राखे छाप छन्। एक धातु छत को मामला मा जस्तै, आधार जस्ती तत्व बनेको छ। अन्न भण्डारण Silos लागि यो समाधान संग गुण जंग छैन र बाह्य प्रभावको प्रतिरोध बढेको छ। तल लागि, यो एक चोटीदार वा समतल छ। भण्डारणको दृष्टिकोण देखि मौलिक महत्व यी embodiments बीच कुनै भिन्नता छ, तर, छुट्टी प्रक्रिया tapered मोडेल को मामला मा facilitated।
पनि उच्च धातु Silo संरचना प्रयोग संग योजना जीवनकालमा धान्न सक्दैन मूल डिजाइन त्रुटिहरू थिए भने। को Silo परियोजनाको प्राविधिक विकास गर्न सही दृष्टिकोण मूल्यांकन लागि मापदण्डहरू एक सेट प्रदान गर्दछ। निस्सन्देह, सबै को पहिलो, ईन्जिनियरहरु लोड र उतराई सञ्चालनका मात्रा र फ्रिक्वेन्सी भर पर्छन्। चक्र को संख्या डाटा क्षेत्र पनि मापदण्डहरू, अनाज आम को जसमा outflow निर्धारण गर्न अनुमति दिन्छ। भाग मा, यो आन्दोलन सुनिश्चित गर्न जो र हुनुपर्छ उत्पादन अन्न भण्डारण Silos मा विशेष धातु छ। यो अन्न छर्रे Silo परिधि को गैर-एकरूपता को अवस्थामा ठाउँ लिन्छ - गणना छ डिजाइन र एक सम्भव रोल को जोखिम को विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न। रेकर्ड र संरचना मा बाह्य भार। तिनीहरूमध्ये एक ठूलो क्षेत्र प्रभावित हुनेछ हिउँ र हावा gusts दबाब हो। Silo गर्न भएको जग स्थित गरिनेछ माटो, को विश्लेषण गर्न यस्तो भार, विशेषज्ञहरु र जिम्मेवार दृष्टिकोण सामना गर्न सक्षम छ। भूमिगत र भूमि घटाव र distending गुणस्तर को प्रकृति मूल्याङ्कन गर्न।
व्यावसायिक अन्न भण्डारण परम्परागत उत्पादन माथिको इस्पात प्यानल प्रयोग समावेश छ। नियम, यो भनेर उत्पादन र भण्डार को स्थापना र सञ्चालन समयमा प्रयोज्य सुनिश्चित गर्न एकै समयमा लागत कम गर्न अनुमति प्रकाश-Gage नालीदार खण्डहरू छ। निर्माण Silos यो दृष्टिकोण, अर्को फाइदा छ। यो ग्राहक आधार, जो धेरै कठिनाई बिना वस्तु छुटाउन सक्नुहुन्छ गर्न किरा को क्षमता छ र सामान संग खण्डहरू को नै माउन्ट मा अक्सर granaries निर्माण गर्न इच्छुक छन्।
तर त्यहाँ पनि निर्माताहरूले यस्तो प्रस्ताव गर्न बेफाइदा छन्। तिनीहरूलाई बीच मुख्य यस मामला मा अन्न भण्डारण लागि Silos को उत्पादन पहिले नै भेला छ निर्माण गुणस्तर जाँच नगरी कारखाना मा बाहिर छ भन्ने तथ्यलाई छ। छ, ग्राहक को जो मामला मा दृढ, यसको विधानसभा भाग निर्देशन गर्न किरा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ ग्यारेन्टी प्रत्येक अन्य गुणस्तर लागि जिम्मेवारी पारी जो धेरै पक्षहरूको बीचमा विभाजित गरिनेछ। यस्तो अवस्थामा जोगिन, सुरुमा सर्पिल Silos को विधानसभा मा संलग्न छन् जो निर्माता सम्पर्क गर्न प्रोत्साहन दिए। यी सेटिङहरू तपाईं सञ्चालन समयमा भण्डारणको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न, र मर्मतका को सुख दिन्छ। यस मामला मा, ग्राहक तुरुन्तै अन्तिम कमीशन अघि वस्तुको गुणस्तर आकलन गर्ने मौका प्राप्त गर्दछ।
आवश्यकताहरू आधारमा, यो Silo एक विशिष्ट ट्यांक वा multifunction सिस्टम धेरै चक्र एक ह्यान्डलिङ अन्न प्रदान गर्न अनुमति दिने हुन सक्छ। मिति, मानक उपकरण निर्माता सीढी Manhole, पाइप पम्पिंग, विस्फोट-प्रमाण प्यानल र tenzoopory उपस्थिति लागि प्रदान गर्न प्रयास गर्दै छ। अधिक महंगा र सञ्चालनको मामलामा आकर्षक र वाहिनी वेंटिलेशन सिस्टम प्रदान संस्करण को उपलब्धता मा। यो कन्फिगरेसन मा एक अन्न भण्डारण Silos अनुसार अनाज को सामाग्री को लागि आवश्यकताहरु संग हावा परिसंचरण नियन्त्रण सक्षम गर्नुहोस्। पनि विशेष सेन्सर प्रयोग र मालिक त सुकेको छ जो ब्याच, र प्राथमिक प्रशोधन लागि विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ जो चिस्यान को मापदण्डहरु, ट्रयाक राख्न सक्नुहुन्छ।
मानक Silo 25-30 मिटर को अर्डर उचाइ छ। यस मामला मा, व्यास एक व्यापक दायरा मा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, सानो फारमहरु छुट संरचना जसको व्यास5मिटर छ। तर सबै भन्दा परियोजनाका लागि 30 मिटर को यो मूल्य राखे। यो embodiment मा अनुमति दिन्छ granary अप उत्पादन 10 000 टन समावेश गर्दछ। पनि लायक टिप्पण डिजाइन आयाम मा सामाग्री को निर्माण मा प्रयोग निर्भरता छ। यसरी, अन्न भण्डारण लागि Silos मा 30-मीटर उचाई 3-4 मिमी को एक मोटाई संग इस्पात को प्रयोग सुझाव। तल्लो तह को आधारमा बलियो गर्न लाभ भण्डारण 8 मिमी मोटी कहिलेकाहीं लागू गरिएको छ।
सामान्यतया Silos तल को प्रकार अनुसार विभाजित छन्। माथि उल्लेख, यो एक tapered र समतल आकार हुन सक्छ। पहिलो संस्करणमा प्राय सजिलो लोड र अन्नको उतराई अनुमति दिने, अस्थायी भण्डारण लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यसपछि उत्पादनहरु अन्य प्राविधिक सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिन्छ। समतल-bottomed नै डिजाइन सामान्यतया कि मालिक कृषि उत्पादनहरु को एक विस्तारित सामग्री लागि बोट प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ वेंटिलेशन संग एक थर्मामीटर संग सुसज्जित छ। अन्न भण्डारण, तिनीहरूले अन्तरक्रिया जो संग परिवहन को आधार मा विभाजन गर्न सकिन्छ प्रकार जो लागि Silos फर्वार्ड - तर यस्तो संरचना को एक प्रकार छ। विशेष मा, granary कृषि उद्यम र वाहक, रेल वा सडक परिवहन प्रयोग बीच आपूर्ति श्रृंखला मा एक transhipment बिन्दु रूपमा सेवा गर्न सक्नुहुन्छ।
क्लासिकल दृष्टिकोण धातु खण्डहरू को समाप्त सेट को Silos विधानसभा संरचना को स्थापना आवश्यक छ। सामान्यतया वेल्डिंग र जडान लागि प्रयोग बोल्ट। थप वस्तु अनुसार सम्मेलन संग प्रक्रिया उपकरण द्वारा complemented छ। खैर, यो थियो bolted जोइन्टहरूमा को Silo सबैभन्दा कमजोर भाग हो। तसर्थ, विशेषज्ञहरु विशेष ध्यान मूल अनुमान गर्न भुक्तानी गर्न सुझाव। उदाहरणका लागि, शरीर बाक्लो इस्पात बनेको छ, जबकि स्क्रू, न्यूनतम बल मान छ भने, तत्व यो संयोजन संग अन्न भण्डारण लागि Silos को स्थापना स्थायित्व प्रदान गर्न असम्भाव्य छ।
निर्माता र मूल्यहरू
पनि अल्पविकसित प्रविधि Silos मामलामा जो सीमित र निर्माताहरु को दायरा, र ग्राहकहरु को सर्कल, महंगी। यद्यपि, यो खण्ड छैन खाली छ, र यो सफलतापूर्वक "Uralselmash", "Promtehstroy», Polex एट अल। अन्न भण्डारण लागि Silo को श्रेणी को प्रारम्भिक मूल्य भिन्न 1 देखि 1.5 mln गर्न यस्ता कम्पनीहरु सञ्चालन। अक्सर यो सहायक प्रणाली र घटक को एक न्यूनतम संग पाना धातु बनेको आकार निर्माण मा सानो छ। ठूलो परिमाणमा अन्न भण्डारण लागि डिजाइन विशाल Silos परियोजनाहरु,3लाख rubles र माथि मा अनुमानित। र मूल्य ट्याग मात्र होइन संग लोड र उतराई आधुनिक वेंटिलेशन प्रणाली, साथै एकाइहरु लैस आकार द्वारा तर पनि वृद्धि गरिएको छ।
Silage कुनै पनि ठूलो मात्रा कृषि उद्यम को प्राविधिक उपकरण मा एक अपरिहार्य वस्तु हो। र अन्न भण्डारण - यो संरचना द्वारा प्रदर्शन गर्ने कार्यहरू अंश मात्र। उपकरण र उपकरणहरू आधारमा, अन्य कच्चा माल डाउनलोड गर्न पनि सम्भव छ। मूल्य जो 2-3 लाख rubles छ, र अपरेसन निर्माण को एक सानो दायरा प्रदान गर्दछ, अन्न भण्डारण गर्न बहु-कार्यात्मक Silos। विशेष, यो अनाज र आफ्नो सुकाउने को प्रारम्भिक तयारी ध्यान दिनुहोस् गर्न सम्भव छ। विश्वसनीयता मुद्दाहरू Silo को चयन मा एक सर्व स्थान कब्जा। डिजाइन बाट सम्पूर्ण प्रक्रिया अन्तिम परीक्षण गर्न प्रयोग गर्नु अघि अनुभवी पेशेवरों चार्ज गरिनेछ यदि वस्तु जस्तै को अधिग्रहण मा गुमाउन मात्र हासिल गर्न सकिन्छ।
बढ्दै बीउ देखि स्ट्रबेरी, र त्यो remontant स्ट्रबेरी छ
तातो खुर्सानी र मरिच खेती
Fattening calves - troublesome, तर लाभदायक
आफ्नै हातमा मौरीले लागि feeders (फोटो)
टमाटर Brawler: विविधता र समीक्षा विवरण
गाई आयरशायर नस्ल - सबै भन्दा राम्रो विकल्प दिगो दूध उत्पादन लागि
आर्बर: यो आफ्नै हातले निर्माण गर्न गाह्रो छैन
एटीआर 72 हवाइजहाज - उड्डयन नजिकै सही बोर्ड
"प्रेत" Vrubel - यो युग को शानदार सिर्जना। कामहरू Mihaila Vrubelya मा भूत विषय
ग्रीवा क्षरण, बलिरहेको: समीक्षा। भन्दा ग्रीवा क्षरण उपचार गर्न?
संयुक्त राष्ट्र चार्टर को इतिहास
क्रिस्टल उलनेबुला र यसको इतिहास
कति चाँडो खाना पकाउने बिना स्वादिष्ट र स्वस्थ feijoa जाम तयार?
सबैभन्दा कम क्यालोरी बजार मा मादक पेय को पेय के हो
गुलाब "DIVA": विविधता को विवरण र हेरविचार को विशेषताहरु
बुनाइ को एक नयाँ प्रकारको - प्याकेजहरू को बुनाई
कसरी DFU-मोडमा आईफोन परिचय यसलाई बाहिर प्राप्त गर्न कसरी
पौडी लागि छोराछोरीको ब्लेड कसरी चयन गर्न। पौडी लागि सबै भन्दा राम्रो ब्लेड